ဒီမှာငါနှင့်အတူနေပါ။ WETHERSPOONS အလွန်အကျွံ - သတင်း
ဒီမှာငါနှင့်အတူနေပါ။ Wetherspoons အလွန်အကျွံ
UK သည်လူတိုင်းသောက်သုံးရန်လိုအပ်သည့်အရက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောလူအိုအရက်ဆိုင်၊ Glam cocktail bar သို့မဟုတ် lowkey ဘီယာဥယျာဉ်ဖြစ်စေ၊ နေရာတိုင်း၌လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုစာသားရှိသည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကလုပ်နိုင်တယ် ကျေးဇူးပြု ဘာကြောင့်ငါတို့ဇွန်းတွေအမြဲတမ်းရှိနေရတာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။ ကြိုတင်မွေးနေ့များ၊ ညများ၊ နှစ်ကုန်အချိုရည်များ၊ အိမ်မှသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အမီလိုက်ရန်၊
အဘယ်အရာကိုများသောအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အပေါ်လှည့်
Wetherspoons သည်ဗြိတိန်ရှိအခြားအရက်ဆိုင်များနှင့်ကပ်လျက်ပူသောရေပူတစ်ခွက်နှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည်မည်မျှအလွန်အမင်းမြင့်မားနေသည်ကိုလူတို့မမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြပါရစေ။
စာသားအဘယ်သူမျှမ Vibe ရှိပါတယ်
Spoons နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားတာလဲ။ သေချာတာကသူဟာသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှအရက်ဆိုင်တွေထက်စျေးသက်သက်သာသာသာပါစေ၊ ဒါပေမယ့်သူကအလုပ်များ၊
Spoons ၏တေးသံသည်မူးယစ်နေသောလူများပြောနေခြင်းနှင့်ညည်းသံများဖြစ်သည်။ လူအများမများပါကအဆင်မပြေမှုမရှိသောတိတ်ဆိတ်မှုသာဖြစ်သည်။
Wetherspoons များသည်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံဟောင်းများတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းပုံစံသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်မှောင်မိုက်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ လန်ဒန်မှာသာ Spoons တွေဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ။ Spoons မှာထိုင်စရာမလိုဘဲမြို့တော်ကိုသွားစရာမလိုပါဘူး။ Peep Show ကထွက်လာတာနဲ့တူတယ်။
ဇွန်းသွားတာထက်ပိုဆိုးတာကဘာလဲ ထိုင်စရာနေရာမရှိသောဇွန်းများသို့သွားခြင်း ညနေခင်းတစ်ခုလုံးသင်ရပ်ပြီးည ၅ နာရီမှစ၍ ထိုနေရာ၌ထိုင်နေသောသူများထံမှအမှားအယွင်းများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်သူတို့လမ်းပေါ်သို့ရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ကျန်လူသူကင်းမဲ့သောစိတ်ပျက်စရာအိပ်မက်ဆိုးများကြောင့်ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ နေရာတိုင်းမှာရှိနေပေမယ့်သူတို့ထဲကတော်တော်များများက Spoons ကိုဆွဲဆောင်တယ်။ သငျသညျဘားမှာသငျသညျသောက်စရာဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေအသက်ကြီးသောသူမပါဘဲ Spoons ကိုသွားနိုင်သလား? မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထိုအရာကိုမအောင်မြင်ပါကအခြား ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်သင်နည်းနည်းပျော်ရွှင်နေလျှင်ပင်သင့်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောစိတ်ဖိစီးနေသောအရက်မူးအလုပ်လုပ်ကိုင်သောပညာရှင်များပါ ၀ င်သည်။
ဗြိတိသျှနှင့်ညံ့ဖျင်းစွာတင်စားထားသောအစားအစာများကိုရောစဉ်းစားပါ။ Wila မှအစားအစာမီနူးရှိသည်။ အစားအစာကစျေးပေါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကစားဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့အစားအစာစျေးပေါသောအခါ, သင်အရည်အသွေးကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်ရှိသည်။
သက်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်မှုများသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဘာဂါသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပီဇာ၏ပုံမှန်ပူဇော်သကာများဖြင့်သာမန်သာမန်သာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျန်မီနူးများကဲ့သို့အထူးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းစရာသို့မဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပါ။
အစားအစာမီနူးအားလုံးသည်အရက်ဆိုင်ဘယ်လောက်ပျင်းပြီးပျင်းစရာကောင်းသလဲဆိုတာကိုထင်ဟပ်သည်။ Spoons menu သည်ဘာမှမဟုတ်၊ ဘာဂါစားသောက်ဆိုင်လည်းမဟုတ်၊ ပီဇာနေရာလည်းမဟုတ်ပါ။ ထပ်ခါထပ်ခါ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အိမ်မှာပဲစားပါ။
Wetherspoons သည်၎င်း၏အိုးများစာရင်းကိုအမှန်တရားနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောကော့တေး Lounge တစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့အား၎င်းတို့ဟုခေါ်ကြပြီးအရက်နည်းနည်းဖြင့်ဖျော်ရည်များသောဖျော်ရည်ဘူးများဖြစ်သည်။
အိုးတစ်လုံးတွင်မင်းဆီ၌ ၁၀၀ မီလီမီတာသောဝိညာဉ်များရှိသည်။ ပေါင် ၆ ပေါင်သည်နှစ်ဆနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏သောက်သုံးမှုသည်ပလတ်စတစ်ဘူးတွင်နစ်မြုပ်နေပြီးဇုံများလေထဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံးအရသာဘယ်လောက်ဖှယျဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်ခန္ဓာကိုယ်မှမစွန့်စားသင့်သည့်အရက်နာကိုမြင်တွေ့ရသည့် Blue Lagoon မှသည်ပထမ ဦး ဆုံးကော့တေးမဟုတ်သော Monster နှင့်ဗော့ဒ်ကာအိုးသို့၎င်း၊ အဆိုပါ pornstar martini အိုးထိုးစစ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပြီး, ဒါဟာ prosecco ရှိသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ pornstar martini ပင် !!! !!!
Tim Martin သည် Brexit ကိုထောက်ခံသည်။
ယခုငါ Brexit ခါးသီးမှုနှင့်အတူဘီယာ၏အရိပ်ကိုစုတ်ချင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် Spoons ဝန်းကျင်နိုင်ငံရေးလျစ်လျူရှုရန်အလွန်ဆိုးလွန်းသည်။ Tim Martin သည် Brexit တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနေသည် 'Tim's Viewpoint'၊ သူ Brexit အကြောင်းကိုစဉ်းစားအရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်။
Tim ၏ရှုထောင့်က Tim ပြောတာက“ Brexit နဲ့သဘောတူညီမှုမရှိရင်ဘီယာရဲ့ဈေးကိုငါလျှော့ချလိမ့်မယ်” နှင့် Brexit ဘီယာ ၅၀၀,၀၀၀ ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် Wetherspoons တွင်ပြုလုပ်ရန်တောက်ပနေသည်။
ထို့အပြင် Spoons ရှိအချိုရည်များအားလုံးသည်စျေးပေါလွန်းသောကြောင့်အကြောင်းပြချက်မှာမာတင်သည်သူ၏ ၀ န်ထမ်းများအားလခနည်းသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူသည်အမျိုးသားအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခထက်ကျော်လွန်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် Real Living Wage ထက်နိမ့်ကျသည် ဆိုလိုသည်မှာ Wetherspoons ၀ န်ထမ်းများပေးသောလစာသည်သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရှိနေထိုင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကလပ်အသင်းအတွက်သင့်လျော်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ဇွန်းများမကမ်းလှမ်းပါနှင့်။ အနီးဆုံး Spoons များကလပ်အသင်းများသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်စားပွဲအနည်းငယ်နှင့်ထိုင်ခုံများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကလေးစားမှုအရှိန်အဟုန်နှင့်သင်မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သည့်လူကြိုက်အများဆုံး DJ နှင့်အတူကကြမ်းပြင်ကိုဖန်တီးရန်ဘေးဘက်သို့တွန်းပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်းတွေကကျောင်းအလွန်မြင့်မားတဲ့ကျောင်းအကန့်တစ်ခုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျစရာအရက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံး။
သူမကိုလက်ဖြင့် နေ၍ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မည်သို့ squirt လုပ်ရမည်နည်း
Wetherspoons များကိုသင်မည်မျှချစ်သနည်း။ ထွက်ရှာတွေ့မှဤပဟေိကိုယူပါ
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Wetherspoon's Loop ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်